Ruto oo maalintii 2-aad booqasho ku jooga gobolka xeebta – The Voice of Northeastern Kenya
Ruto oo maalintii 2-aad booqasho ku jooga gobolka xeebta
Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa shalay khamiistii billaabay booqasho 4 cisho qaadaneysa oo uu ku marayo 6 maamul goboleed oo ku yaalla gobolka xeebta.
Wafdi siyaasiyiin ah oo uu Ruto hor kacayo ayaa maanta gobolkaasi ku sugan maalintii 2-aad, iyagoo ujeedadooduna ay tahay sidii ay taageero dheeraad ah ugu heli lahaayeen xisbiga tala haya ee Jubilee.
Mashaariicda uu madaxweyne ku xigeenka kasoo fulinayo maamul goboleedyada ku yaalla gobolka xeebta ayaa waxaa ugu badan deeq raashin ah oo uu gaarsiinayo deegaanno ay saameysay abaar iyo sidoo kale kulamo uu la yeelan doono shacabka.
Maanta oo Jimce ah ayaa la filayaa in uu madaxweyne ku xigeenka gaaro ismaamulka Taita-Taveta, halkaasoo qorshihiisu yahay in uu kula kulmo ururrada haweenka.
Socdaalka Ruto ayaa qeyb ka ah dadaalka ay hogaamiyeyaasha Jubilee ku doonayaan in ay sare u qaadaan taageerada ay ka heystaan shacabka, xili uu dalka kusii dhawaanayo doorashada 2017-ka oo ay hadda naga xigaan wax ka yar 9 bilood.
Maalmaha sabtida iyo axadda ee nagusoo aadanna waxaa lagu wadaa in madaxweyne ku xigeenka dlaka uu booqdo maamul goboleedyada Kwale iyo Mombasa.
← 40 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Ciraaq
Ku dhawaad 15 qof oo ku dhimatay dagaal ka dhacay Koonfurta Sudan →